Laga Yaabaa 8-dan in Aanad Hore u Ogayn- – Beegsonews-Wararka maanta
Home MAQAALO Laga Yaabaa 8-dan in Aanad Hore u Ogayn-
Laga Yaabaa 8-dan in Aanad Hore u Ogayn-
Subaxa Jimcaha- Ka hor inta aanu soo muuqan kaaha qorraxdu, dhammaan makhluuqa oo dhami way aamusaan iyaga oo isu diyaarinaya Afuufidda “Suur-ta” iyo in Qiyaamuhu dhaco, marka laga reebo Bani-aadamka oo isagu qaflad ku jira.
Marka uu ibnu aadamku geeriyoodo, timihiisu waxay sii wadaan koritaanka muddo dhawr bilood ah.
Marka uu qofku muusig dhagaysanayo, jinka kuwiisa xun iyo shayaadiintuba waxay ku soo xaadiraan hareerihiisa, iyagoo boodboodaya oo jaasaya.
Hadii qofkaasi la tusi lahaa muuqaalkaas iyo waxa hareerihiisa ka socdana, naxdin ayuu u dhiman lahaa.
Isaga oo Bani’aadamku dhintay ayuu haddana dhaqdhaqaaq ka socdaa qaybta bidix ee maskaxdiisa muddo 7 daqiiqo ah.
Maskaxdiisu waxay isku dayaysaa in ay dib usoo celiso xasuusihii hore iyo dhammaan wixii uu qofkani soo maray.
“Udgoonaheenu (SCW) wuxuu yidhi “Marka uu Malakul Mawtku nafta ka siibayo, qofka waxa la horkeenaa camalkiisii ha xumaado ama ha samaado eh”.
Marka aad huruddo, waxa laga yaaba in aad ku dul seexato gacantaada amase meel jidhkaaga kale kamid ah kaddibna uu istaago qulqulka dhiigu, markaas maskaxdu waxay ku tusinaysaa riyoyin cabsi badan si aad hurdada uga kacdo oo aysan gacantaasi naafo u noqonnin.
Waxa laga yaabaa in aad saqda dhexe sabab la’aan u kacdo 2 ama 3 jeer.
Waxa laga yaaba in RABBI ku jecel yahay oo uu rabo in aad barido wakhti uu samada koowaad ku soo dhawaaday.
Waxa la shega in Malakul Mawtku uu maalintii ku soo fiiriyo 360 jeer isaga oo Rabbigiis amar uga sugaya in uu nafta kaa qabto.
Ka ducayso oo ku dedaal in uusan ku qaban adoo macaasi faraha kula jira.
Salliga rasuulku waxa uu qaadaa murugada, werwerka iyo culayska nafta, wakhti rasuulka lagu salliyana waxa ugu khayr badan habeenka jimcuhu soo galayo.
Miyaysan kugu filnayn in adiga rabbi kugu salliyo 10 jeer.
اللهم صلى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
W/Q: Mohamud Abdi Salaad
Previous articleWefti ka Socda Dawladda Ruushka oo Somaliland soo Gaadhay
Next articleWeedha Wanaagsani Waa Muftaax Qalbiyada Lagu Furto!
Diblomaasiyiin Ajanabi ah oo ka dareen celiyay Safarro & Socdaallo ay...